About us - Huai'an Aide umfutholuketshezi Machinery Co., Ltd.
IHuai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.itholakala e-Huai'an futhi yasungulwa ngo-2011. Imikhiqizo yayo esemqoka isetshenziswa kakhulu emishini yobunjiniyela, ukugcinwa kwempahla nokusingathwa, ukuphathwa kwempahla kanye nemikhakha yemishini ehlobene nemoto. Kuyibhizinisi elihlanganisiwe eligxile ekukhiqizeni amaphampu egiya, amayunithi wamandla wokubacindezela, ama-valve wokubacindezela, izihlungi, amasilinda nezinhlelo ze-hydraulic. Imikhiqizo yayo i-AC yohlobo A, C, DC yohlobo D, C. Izindawo eziyinhloko zohlelo lokusebenza: amalifti ezimoto, amafolokhi, izitaki zikagesi, amapulatifomu okuphakamisa, amapayipi okugoqa, amaloli kadoti. Kuyo yonke le minyaka, ihlinzekele ngezinsizakalo ezisekela amathuluzi omshini, izimoto, imishini yokulungisa izimoto, i-Loader, imishini yokusebenza, imishini yezimayini, amageja eqhwa, iziqhekezi zokhuni, amapulatifomu okuphakamisa nezinye izimboni. Ngaphezu kwalokho, inkampani ibuye igxile ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwamapuleti ama-valve wesifunda ahlukahlukene, aklanyelwe futhi acutshungulwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme zokusetshenziswa kwe-aluminium alloy, ubuchwepheshe bokwenza ingxubevange obuphambili nobuchwepheshe bokwelashwa kokushisa.
Ikhwalithi yomkhiqizo ivelele. Imikhiqizo ehamba phambili yenkampani ingamaphampu wamagiya aphezulu anengcindezi namancane, amaphampu aphindwe kabili, amayunithi kagesi we-AC neDC, asezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba. Azithengiswa kuphela ezwekazini laseChina naseTaiwan, kodwa futhi zithunyelwa e-United States, Canada, Ireland, Italy nakwezinye izimakethe zomhlaba wonke.
Umsebenzi oyinhloko wenkampani ukuhlinzeka ngemiklamo ehlukahlukene ye-hydraulic system kanye nokukhiqizwa kwamakhasimende ahlukile. Kubandakanya isiteshi samaphampu wokubacindezela, amavalvu ahlukahlukene wokulawula namaphayiphu we-cartridge nokunye okusekela nokuhlangana. Ukusebenza kahle okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi.
Le nkampani ibilokhu inamathele kwifilosofi yebhizinisi ye- "Professionalism-Excellence", "Quality-Supreme", "Innovation-Refining and Transformation", kanye ne- "Integrity-One Heart". Ukwakha ikusasa elichumayo kanye namakhasimende kungumgomo wethu kuphela.
Le nkampani inemishini yokukhiqiza esezingeni eliphezulu nezindlela zokuhlola eziphelele, futhi isungule uhlelo lokuphatha ikhwalithi yomsindo.
Inkambiso yethu yenkampani: ikhwalithi yokusinda, isivinini sokuthuthuka, impumelelo yezobuchwepheshe ngokuzayo.
Inkampani inamathela kwifilosofi elula yenkampani ye- "Quality Today, Imakethe Yakusasa", futhi bonke abasebenzi bakwa-Aide bazoqhubeka nokusebenzela amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu.
Siyakwamukela abangani abavela kuzo zonke izizinda zokuphila ukuvakashela nokuhlola inkampani yethu, ngiyabonga ngokuthembela kwakho nokusekela kwakho